कोरिया नेपाली श्रमिकको आकर्षक श्रमबजार हो । पन्ध्रवर्षदेखि दसहजार नेपालीले त्यहाँ काम गरेका छन् । तत्कालीन सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बीच श्रमिक पठाउने विषयमा विवाद भएको र त्यो सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । परिणामस्वरूप कोरियाले नेपालबाट श्रमिक नलैजाने निर्णय गर्‍यो । कारण श्रमिकलाई अत्यधिक शोषण हुने गरी ठूलो रकम लिनु -आठलाखसम्म) आदि थिए ।
Developing private enterprises: Issues and prospects - Ram Babu Nepal
Developing countries are facing the critical challenges of alleviating poverty and correcting inequalities in the distribution of income and opportunities, delivering the basic goods and services, stabilizing and sustaining the levels of growth and development achieved. Private enterprises can make meaningful contribution in facing these challenges inanumber of ways including industrial development, increase in production and productivity, investment and trade and providing employment opportunities to the growing number of economically active population.
डा सूर्य सुवेदी बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा कानूनका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँ पछिल्लो समय नेपालका घटनाक्रमहरुलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ । प्रस्तुत छ, डा सुवेदीसंग किशोर नेपालको संवादः वैशाख आन्दोलनपछि देशको अवस्थालाई कसरी नियाल्नु भएको छ - वैशाख आन्दोलनपछि आकांक्षा र अपेक्षाहरूको बाढी आएको छ । आकांक्षाहरू वास्तविक धरातलमा टिकेका छैनन् । मुलुकको साधन र स्रँेतले भ्याउन नसक्ने खालका आवश्यकताहरू देखापरेका छन् । आकाङ्क्ष्ँँ राख्ने सपना देख्ने र प्रगति गर्ने नैर्सर्गिक अधिकार हो मानिसको । नेपाली जनताले पनि महान् जनआन्दोलनपछि आफ्ना आकाङ्क्ष्ँाहरूलाई अभिव्यक्ति दिएका छन् भने यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।
विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली, विकसित र धनी राष्ट्र भएको छाप पार्न अमेरिकी सरकारलाई सफलता मिलिरहेको छ । त्यसैले गरिब मुलुकका नागरिकले अमेरिका पुग्ने सपना देख्नु अस्वाभाविक होइन । फरक यत्ति हो, कसैले त्यहा� पुगेर धनसम्पत्ति थुपार्ने सपना देख्छ भने कसैले त्यहा� पुगेर यथार्थ बुझ्ने । प्राध्यापक अभि सुवेेदीलाई समेत भिसा दिन अस्वीकार गरिएपछि अमेरिका पुगेर वास्तविकता बुझ्ने मेरो योजना झन् बलियो भएको थियो । त्यही सपना पूरा गर्न अमेरिकाको ६ हप्ते पर्यटक बन्ने योजनासाथ नेपाली कलाकारहरूले भरिएको बाल्टिमोरमा उत्रिएको थिए� म । आफ्नो देशको नवआगन्तुकलाई हरेक नेपालीले सहयोगी भावना दर्शाउ�दारहेछन् अमेरिकामा । 'काम भेट्टाइसक्नुभयो - नभए उता डाउन टाउनमै मेरो काम गर्ने ठाउ�, एकजना इन्डियनको सववे -फास्टफुड रेस्टुरा�) छ । भिजिट भिसामै आएको भए पनि त्यहा� काममा लगाइदिन सक्छु म तपाईंलाई ।'